Umsebenzi wezandla zentsimbi - i-Metal Badge
Ibheji yentsimbi: ngamafutshane, luphawu olunxitywe emzimbeni ukubonisa ubunikazi, indawo yokuhlala kunye nembeko. Ingxelo ebhaliweyo yokwenyani yebheji yavela e-China. Kubhalwe kwisicwangciso esiliQili seMfazwe, uQi CE I: “UQin wazenza ngathi uhlasela uQi nguHan noWei. UZhang Zijiang, umthunywa kaKumkani Wei o ...
Wamkelekile ku-2021 kunye noNyaka oMtsha oNwabileyo kubo Bonke Abahlobo!
U-2020 wawungunyaka onzima kakhulu kuninzi, abantu kwihlabathi liphela baye babandezeleka kakhulu ngenxa yeCovid-19. Sibuhlungu kakhulu ngabo bangasindanga kulo bhubhane, amashwa abo ngamashwa oluntu lonke. Siyathemba ukuba abantu bawo onke amazwe banokumanyana njengeyodwa boyise i-ep ...
Siyavuyisana ngokufudumeleyo kumzi-mveliso wethu wokufumana iSiqinisekiso soMthengisi esiqinisekisiweyo yi-TUVRheinland
Njengenye yeendlela ezibalulekileyo kurhwebo lwamazwe aphesheya, iAlibaba Global Site itsala uninzi lwezixhobo zabathengi kwihlabathi kwaye ibabonelela ngesixa esikhulu solwazi lomthengisi. Ukwandisa intengiso kunye nokudibanisa izixhobo ezikhoyo zabathengi esinazo, inkampani yethu ...